मृत्यु जितेर फर्किएका सिपाही, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
प्रमको अदम्य साहसले थोरबहुत काम गर्‍यो होला। त्योभन्दा बढी उहाँले अँगालेको पेशा अनि प्राप्त राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसाले काम गरेको छ। मर्ने रहर त कसलाई हुन्छ र ? कोही सडक दुर्घटनामा अकालमा मर्दै छन्, कोही सिटामोल÷जीवनजल÷पीयूष नपाएर अकालमा मर्दै छन्। प्रमले अब आराम गर्दा देश र उहाँलाई राम्रो हुन्छ। अझै पनि कुर्सी ओगट्नु भनेको बाँकी कसैलाई पनि विश्वास नगर्नु हो।
कुन दिन यी डलरवादी महिलाहरूले ‘आमा शब्दले महिलाहरूको अपमान गर्‍यो, यसको साटो मम्मी वा मम मात्रै भन्नुपर्छ’ भन्नेछन्। यिनीहरू असल नेपाली संस्कार सिध्याउन लागेका छन्। सावधान, यी नेपाली भेषका दलालबाट !
डलरवादी भन्दिएपछि जितियो हैन त ? तर, विषयलाई सरक्क पन्छाउन यो ट्रिक हल्का पुरानो भैसक्यो। नयाँ खोज्नुस्। कतुर्क नै खोज्न तपाईंहरूलाई के गाह्रो !
‘चेली’ भन्ने शब्दको मैले बुझेको सामाजिक–सांस्कृतिक परिभाषाः तुलनात्मक रूपमा कमजोर, पवित्र, पूज्य, ठूलो भएपछि बिहा गरेर रुँदै अर्काको घर जाने, बिहा गरेर गएको मानिसले हेला गरेमा दुःख पनि पाउन सक्ने, लज्जालु, अरू (पुरुष) ले दयामाया र संरक्षण गर्नुपर्ने।
शब्दकोशले के भन्छ भन्ने कुरामा सरोकार छैन। हामी हाम्रा दिदीबहिनी, फुपू, छोरी, नातिनी, सबैलाई एकैपल्ट सम्बोधन गर्न पर्यायवाची रूपमा छोरीचेली÷चेलीबेटी भनेर सम्बोधन गर्दछौँ। कमजोर र दया गर्नुपर्ने भनेर हैन। स्थान विशेषमा शब्दको प्रचलन फरक हुन सक्छ।
बुद्धि नपलाएका उमेरकाले इँटा हाने भनेर बुद्धि पलाएकाले रड हान्ने होइन। सम्झाउने हो। प्रहरीको तालिममा मान्छेबाट प्रहरी बन्न होइन, मान्छे रहेरै प्रहरी बन्न सिकाऊन्।
भावुक दी इमोसनल
हो हजुर, सम्झाउनपर्ने ! उताबाट ढुंगा, लाठी, रड आगोबाट हमला भैरहेछ। अनि, यताबाट प्रहरीले ‘पख नानी हो, म तिमीलाई चकलेट दिउँला, यी जुस ल्याइद्या छु, खेलौना कार पनि छ’ भन्नपर्ने !